युगसम्बाद साप्ताहिक - राष्ट्रिय पोशाकलाई मान्यता
Wednesday, 11.13.2019, 12:13am (GMT+5.5) Home Contact
राष्ट्रिय पोशाकलाई मान्यता
Monday, 08.22.2011, 03:26pm (GMT+5.5)
नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र नेपालीको गौरबसंग सम्बन्धित एउटा प्रश्नको हल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार नेपालको राष्ट्रिय पोशाक दौरा–सुरुवाल नै भएको फैसला गरेपछि राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले राष्ट्रिय पोशाकप्रति देखाएको उदासिनताको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । परिवर्तनको नाममा मुलुकको अति सम्वेदनशील मानिएको विषयमा पनि अनर्थ रुपमा विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास बारम्बार भैरहेको बेला आएको सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय पोशाकप्रतिको विवाद एक हदसम्म साम्य भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय गीत बदलियो, राष्ट्रिय झण्डा पनि बदल्ने कुरा निकै चर्कोसंग आयो । राष्ट्रिय पोशाकका विषयमा पनि त्यस्तै विवाद उत्पन्न गरिए । राष्ट्रिय गान बदलियो त्यो ठूलो कुरा भएन तर राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय पोशाक समेत बदल्ने प्रयास नितान्त असंगत थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला सह्रानीय मानिएको छ ।
परिवर्तनको अनुभूति जनताको जीवनस्तर र राष्ट्रिय परिस्थितिको सकारात्मक फड्कोबाट मात्र हुन्छ । सिंहदरबारमा पस्नेको अनुहार बदलिएर परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन । जनताको जीवनस्तर सुधारिनु पर्छ । राष्ट्र र जनताका लागि केही नगर्ने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने गरी विवाद ल्याउनै नहुने पक्षमा विवाद खडा गर्ने काम मुलुकका लागि घातक हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि संघीयता र संघीयताभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तता दिने पार्टीहरूको घोषणाले मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने खतरा उत्पन्न ग¥यो र त्यो अझै टरेको छैन । यही विषयले मुलुकको संविधान निर्माणमा समेत अवरोध खडा गरिरहेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा अब केही हदसम्म सजिलो पारेको छ । संघीयताका विषयमा दलहरूको सहमतिबाहेक अरु कुनै उपाय छैन । अरुलाई घुर्की देखाउने र आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउने नाममा यतिबेला राष्ट्रिय पहिचानका महत्वपूर्ण पक्षहरूमाथि प्रहार भैरहेका छन् । त्यस्तोमा राष्ट्रिय पोशाक पनि परेको हो । मन्त्रीदेखि लिएर उच्च प्रशासकसम्म राष्ट्रिय पोशाकलाई उपेक्षा गर्दै विदेशी पहिरनमा ठाट्टिएर हिंड्ने गरेका छन् । यो लाजमर्दो स्थिति हो । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीहरूका लागि पोशाकको व्यवस्था ग¥यो, तर त्यहाँ राष्ट्रिय पोशाकको महत्वपूर्ण पक्षलाई वेवास्ता गरियो । कर्मचारीहरू सुट–टाइमा ठाँटिएर कार्यालय छिर्छन् । के कर्मचारीहरूका लागि राष्ट्रिय पोशाक नै अनिवार्य गर्न सकिंदैनथ्यो ? सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि केही परिवर्तन हुन्छ कि ? आशा गरौं ।
नेपालको राष्ट्रिय पोशाक नेपालको भूगोल सुहाउँदैन भन्ने भन्ने आग्रहजन्य धारणा पनि यदाकदा सुनिन्छ । तराईको गर्मीमा दौरा–सुरुवाल–कोट लगाउन त्यति सजिलो छैन भने हिमाली क्षेत्रको जाँडोमा त्यो पोशाकले काम गर्दैन भन्दै राष्ट्रिय पोशाकको मानमर्दन गर्नु नितान्त असंगत कुरा हो । राष्ट्रिय पोशाकको कुनै महत्व छैन भन्नु आफ्नैपनाबिरुद्ध उभिनु हो । राष्ट्रिय चिनारीको रुपमा रहने पोशाकको महत्व स्थापित हुनुमा कुनै लघुताभाष छैन । तर नेपालमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीसम्मले विदेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्ने आवश्यकता नठानेको विडम्वनापूर्ण स्थिति छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय पोशाकको विश्व मञ्चमा अलग्गै पहिचान छ । हजारौंको भीडमा नेपाली राष्ट्रिय पोशाक लगाएको व्यक्ति सजिलै छुट्याउन सकिन्छ भने विश्वभरिको झण्डा फहराइएको स्थानमा नेपालको झण्डा सजिलै चिन्न सकिन्छ । यही हो नेपाल र नेपालीको मौलिक परिचय भनेको । यसलाई मास्ने होइन अझ फैलाउँदै जानुपर्छ । भारतमा रहेका नेपाली भाषीहरूले दौरा–सुरुवाललाई आफ्नो पहिचानको विषय बनाएर आन्दोलनमा उत्रिए तर नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद् र उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई समेत लोकतन्त्रपछि अनिवार्य राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्ने नियम बसाउन सकिएन । पोशाकमा अनुशासन भयो भने व्यक्तिको चरित्रमा पनि अनुशासन कायम हुन्छ । पोशाकले मानिसको व्यक्तित्वमा जसरी निखार ल्याउँछ त्यसले राष्ट्रको परिचयलाई पनि उजिल्याउँदै जान्छ । त्यसैले राष्ट्रिय पोशाकको मानमर्दन हैन यसको सम्मान गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय पोशाक सम्बन्धी फसलालाई कार्यान्वयन गर्नु अब सरकारको दायित्व हो ।